अविवाहित आँचलका लागि हेलिकोप्टर सयर देखि १६ लाखको लेहेङ्गा – श्रीमान भने सेकेण्ड ह्याण्ड — Imandarmedia.com
अविवाहित आँचलका लागि हेलिकोप्टर सयर देखि १६ लाखको लेहेङ्गा – श्रीमान भने सेकेण्ड ह्याण्ड
काठमाडौ । अविवाहित नायिका आँचल शर्माको बिबाहको चर्चा त सबैले सुनिसक्नुभएको होला । ‘नाईं नभन्नू ल ४’ बाट नेपाली फिल्ममा भित्रिएकी अभिनेत्री आँचल शर्माले डेढ वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरिन् भनेर बिबाहमा भएका तामझामका खबर पढ्न र दृष्य, तस्वीर हेर्न भ्याइसक्नुभएको होला । तर गोप्य कुरा थाहा नहुन सक्छ । आज हामी खुलाईदिन्छौ । बिहीवार उनले प्रेमी उदिप श्रेष्ठसँग लगनगाँठो कसेकी हुन् । बुढानिलकण्ठस्थित होटल पार्क भिलेजमा हिन्दू परम्पराअनुसार आँचल र उदिपले विवाह गरेका हुन् ।
अभिनेत्री आँचल शर्माले आफ्नो विवाहको तस्विरहरु इन्स्टाग्राममार्फत् सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले ‘म र मेरा लागि सधैं’ क्याप्सन लेख्दै उदिपले बरमाला लगाएको र आफू दुलहीको भेषमा सझिएको केही तस्विरहरु साझेदार गरेकी थिइन् । तस्विरमा उनलाई कतै भावुक त कतै खुसी मुद्रामा देख्न सकिन्छ । उदिपले बरमाला लगाउँदै गर्दा उनी निकै प्रफुलित देखिएकी छन् ।
यसै हप्ता आँचलले चिकित्सक डा. उदिप श्रेष्ठसँग विवाह गरिन्, त्यो पनि करोडौं खर्च गरेर । फेसबुकमा विवाहको तस्बिरहरु हालिन् । पार्टीका लागि काठमाडौको बीचमा रहेको होटल हायतमा हेलिकप्टरमा पुगेको र आँचलले लगाएको १६ लाखको लेहेङ्गाको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक छ । यसैगरी उनले लगाएको गहनाको मुल्यकोपनि खुबै चर्चा छ ।
समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले आँचलको पहिरन र हेलिकप्टरमा होटल पुगेको कुरालाई ट्रोल बनाइरहेका छन् । आँचलले विवाह गरेका उदीप श्रेष्ठको भने यो दोस्रो विवाह हो । उनको यसअघि विदेशीसँग विवाह भएको थियो । उदिपसँग धनसम्पत्तिका कारण नजिकिएको फिल्मि बजारमा हल्ला छ। उदिप धनी परिवारका हुन् ।
चलचित्र क्षेत्रमा नाम हुने तर दाम कमै हुने भएकाले पनि नायिकाहरु पैसावाल पुरुषसँग विवाह गर्दै आएका छन् । चलचित्रबाट नाम कमाउने र त्यही नामबाट धनाढ्य पुरुष खोज्ने परिपाठी समेत विकास भएको छ ।
उपचारका लागि भारत पुगेका झलनाथको स्वास्थ्य अवस्थाबारे आयो यस्तो जानकारी
दलित भनेर कोठा नदिने घरबेटीविरुद्ध रुपाले दिइन् प्रहरीमा उजुरी
खनाल अस्पताल भर्ना भएका बेला एकाएक माधव नेपाल निवास किन पुगे देउवा र प्रचण्ड ?
खोपका लागि बेलायत सरकारलाई पत्र पठाउने तयारी
थप ६६५३ जनामा संक्रमण पुष्टि, ८ हजार बढी निको भए
ओलीको चौतर्फी बिरोध भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखे एस्तो स्टाटस